पक्राउ पुर्जी जारी भएलगत्तै गायिका आस्था राउतले सिक्किमबाटै यतिसम्म भनिन्, प्रहरी नै तिनछक — Sanchar Kendra
पक्राउ पुर्जी जारी भएलगत्तै गायिका आस्था राउतले सिक्किमबाटै यतिसम्म भनिन्, प्रहरी नै तिनछक
काठमाडौं । प्रहरी सङ्गठनलाई नै अपशब्द प्रयोग गरेको आरोप लागेकी गायिका आस्था राउतविरुद्ध प्रहरीले अभद्र व्यवहार कसुरअन्तरगत मुद्दा चलाएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले उक्त कसुरमा आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पक्राउको अनुमति लिएर मुद्दा अघि बढाएको हो ।
निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौलोचन शैंजुले परिसरको माग बमोजिम आज पक्राउको अनुमति दिइएको जानकारी दिनुभयो । परिसरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले राउतलाई अभद्र व्यवहार कसुरअन्तरगत मुद्दा अघि बढाइएको जानकारी दिँदै परिसरमा नआए पक्राउ गरेर ल्याइने बताउनुभयो ।
आफूलाई प्रहरीले ‘तँ’ भनेर दुव्र्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै गायिका राउतले प्रहरीलाई अपशब्द प्रयोग गरेको श्रव्यदृष्य सामग्री (भिडियो) बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । दश मिनेट ३१ सेकेन्डको भिडियोमा उहाँले प्रहरीलाई गालीगलौज गरेको सुन्न सकिन्छ ।
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक उडानतर्फको प्रस्थान कक्षमा भएको उक्त घटनाको सिसी टिभी फुटेज शुक्रबार सार्वजनिक भएको थियो । ‘फुटेज’मा प्रहरीको भन्दा गायिका राउतको गतिविधि शङ्कास्पद देखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यता राउत अहिले कार्यक्रमका लागि भारतको सिक्कीम पुगेकी छिन् । केही सञ्चारमाध्यमहरुमा उनी फरार भएको खबर फैलिएपछि उनले आफु छिट्टै नेपाल आएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएकी छिन् । यो भन्दा पहिले पनि उनले पटकपटक आफुले बालेका कतिपय शब्द अपाच्य भएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा माफि माग्दै आएकी छिन् ।
प्रहरीले अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा गायिका आस्था राउतलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरेको छ । सिक्किमबाट आइतबार काठमाडौं फर्कन लागेकी आस्थाले विमानस्थलबाट सिधै प्रहरी हिरासतमा जानुपर्ने हुन सक्छ । आफूलाई विमानस्थलमा अमर्यादित व्यवहार गरेको भन्दै आस्थाले फेसबुकमा प्रहरीलाई गालीगलौज गरेकी थिइन् ।
विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचका क्रममा बसेकी महिला प्रहरीले आफूलाई ‘तँ’ भन्दै दुर्व्यवहार गरेको उनको दाबी छ । उक्त घटनाको सीसीटिभी फुटेज प्रहरीले सार्वजनिक गरिसकेको छ । फुटेजमा आस्था र प्रहरीबीच विवाद भएको देखिए पनि आवाज नभएकाले अपशब्द प्रयोग भएको वा नभएको यकिन गर्न सकिंदैन ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा आस्थाको पक्ष र विपक्षमा बहस तीव्र छ । धेरैले चाहिँ आस्थाकै गल्ती औंल्याएका छन् । हुन पनि प्रहरीलाई मर्यादित बन्न सिकाउने आस्थाले फेसबुक लाइभमा आफैं अमर्यादित भाषा प्रयोग गरेकी थिइन् । उक्त घटनामा संलग्न महिला प्रहरी रमिता श्रेष्ठले आस्थाविरुद्ध प्रहरीमा अभद्र व्यवहारको उजुरी गरिन् । त्यसैका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरेको हो ।
एउटी चर्चित गायिकालाई संकट आइलाग्दा कलाक्षेत्रका व्यक्तिहरु भने अधिकांश मौन छन् । जसले मुख खोलेका छन्, उनीहरु पनि आस्थालाई समर्थन गर्न सकेका छैनन् ।
यस्तो छ राईको स्टाटस
‘एअरपोर्टमा साहरुख खानको त झन् कट्टु नै चेक गरेको थियो । त्यो उसको अधिकार हो । अब रह्यो पुलिसले कस्तो व्यवहार गर्यो ? चेकिङमा कफी, पानी लान पाइँदैन । वाल्लेट (मनी ब्यग ) पनि पाइँदैन । उनी बैनी हुन् । राम्री गायिका हुन् । अझ एक रियलिटी शो ‘द भ्वाइस’की कोच पनि हुन् । आफ्नो इज्जत ठाउँमा राख्नु पर्छ । माया लिनेले घृणा पनि सहनु सक्नु पर्छ । तब न हामी कलाकार, उसै त हामी नाथे कलाकार । धेरै रुन्ची नबन, अब तिमी ठूली भइसक्यौ । आस्था र एअरपोर्टमा खटिएका कर्मचारी दुबै सुध्रिन आवश्यक ।’
अभिनेता तथा निर्माता दीपकराज गिरीले पनि यस विषयमा लामो स्टाटस लेखेका छन् । उनको स्टाटस मार्मिक र सन्तुलित पनि छ । उनले अन्य देशहरुमा एयरपोर्टमा कलाकारलाई विशेष व्यवहार हुने गरे पनि नेपालमा भने नेतालाई मात्रै ‘भीआईपी’ मानिने उल्लेख गरेका छन् ।
गिरीको स्टाटस जस्तो तस्तै:
प्रिय आस्था बहिनी… यो बिषयमा लेख्न मन थिएन तर तिमीले निरन्तर गाली खाएको देखेर किन किन लेख्न मन लाग्यो । म पनि विगतमा यस्ता धेरै घटनाहरूबाट गुज्रेको छु । यस्तै प्रकारका घटनाहरूबाट पाठ पनि सिकेको छु ।
समस्या कहाँबाट आयो भने तिमीले भिडको सामना गर्दै प्रहरीलाई चेक गराउँदै अघि बढ्नुपर्थ्यो । भिड र संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने प्रहरी जवानहरूलाई छुट्टै प्रेसर हुन्छ । उनीहरूलाई छुट्टै दबाब हुन्छ । उनीहरू १० घन्टे लामो ड्यूटीमा हुन्छन्, सानो गल्ती भए जागिरै संकटमा पर्छ । त्यस्तो बेला उनीहरूबाट अलि रूखो व्यवहार निस्किन्छ पनि । त्यहाँ पनि निस्कियो होला ।
तर हामी कलाकार वा सेलेब्रिटिजको गल्ती नै नभए पनि समाचार बाहिर आएपछि गल्ती हाम्रै देखिने रहेछ। सेलेब्रिटिज भनेको सेतो कपडा रहेछ अरू रङमा दाग नदेखिए पनि सेतोमा सानो दाग पनि देखिहालिन्छ । अतः सहनुपर्ने हामीले नै रहेछ । विदेशमा प्रायस् यस्तो घटना हुँदैन किनकि त्यहाँ नेतामात्रै भिआइपी हुँदैनन् । धेरै कर तिर्ने व्यापारिहरू, नाम चलेका खेलाडी, कलाकारहरूलाई पनि भिआइपी मानिन्छ र सुविधाजनक ढंगले चेकजाँच हुन्छ र भिडको सामना गर्नु पर्दैन । यस्तो दुर्घटनाको सम्भावना कम हुन्छ तर यो देशमा नेता मात्रै भिआइपी हो ।
यो संवेदनशीलतालाई हामीले बुझ्नुपर्छ किनकि हामी भिडबाट नै गुज्रिनु पर्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामी सतर्क हुनैपर्छ ।
मापसे काण्डमा म पनि परेँ । गल्ती मेरै थियो। तर जब म प्रहरीको पञ्जामा परेँ । ममाथि भएको दुर्व्यवहार डर लाग्दो नै थियो तर मेरो कुरालाई कसैले गम्भीरतापूर्वक नै लिएनन् । यसबारे हामीले नै होसियार हुनुपर्ने रहेछ । हामीलाई अन्याय नै भयो भने पनि ‘कलाकार हो फुर्ती देखायो होला फस्यो नि’ भनिँदो रहेछ । त्यसैले सकेसम्म यस्तो झमेलामा नपर्नु र परिहाले पनि माफ पाऊँ भनेर छट्किनु नै सबैभन्दा उत्तम रहेछ । तिमीलाई पनि त्यस्तै केही रूखो व्यवहार प्रयोग भयो होला । तर गल्ती तिम्रो फेसबुक लाइभले गर्यो । त्यसमा प्रयोग भएका शब्दले समस्या उत्पन्न गरायो ।
तिमीलाइ केही नभई त्यस्तो भनिनौ होला । तर बाहिरबाट हेर्दा तिमी नै अमर्या्दित देखियौ । अतस् यो घटनालाई तिमीले हामी सबैले एउटा पाठको रूपमा लिनुपर्छ । जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ । आज कतिपय स्ट्याटसहरू ‘कलाकार यस्तै घमण्डी हुन्छन्न् भनेर आउँछ दुःख लाग्छ ।
त्यसैले सत्य जे होस् त्यो प्रहरी जवान बहिनीसँग म माफी माग्छु । तिमी पनि माग। सेलिब्रेटी कल्चर हाम्रो देशमा छैन । हामी सामान्य नागरिक नै हौँ । यो वास्तविकतालाई बुझौँ । नायिका करिश्मा मानन्धरले आइतबार स्टाटस लेखेकी छिन् । उनले असभ्य भाषा बोल्ने अधिकार कसैलाई नभएको उल्लेख गरेकी छिन् । आस्थाले पहिलोपटक यो अनुभव लिएको भन्दै करिश्माले आफूले यस्तो भोगेर वाक्क भइसकेको उल्लेख गरेकी छन् ।
‘असभ्य भाषा बोल्ने अधिकार कसैलाई छैन । पुलिस पनि नेपाली मानिस हुन् । दिनभरी दिक्क लाग्ने कामले वाक्क छन् होला । तर, भाषाको प्रयोग गर्दा ध्यान पुर्‍याउनु होला,’ करिश्माले लखेकी छन् । उनी थप्छिन्, ‘आवेगमा आस्थाले केही त्रुटि बोल्ने समयमा गरिन् होला । तर, के नेपाल पुलिसबाट ‘तँ’ नखाने कोही छौं ? त्यो पनि बिनाकारण ? हामी त यो कामको स्ट्रेस हो भनेर हाँसेर छोडिदिन्छौं । तर, अब केटाकेटीले रियाक्ट गरिन् । त्यही हो ।’